Isikhokelo soMqalayo ukusuka kwi-Semalt On Web Web Scraping
Idata nolwazi kwiwebhu zikhula imihla ngemihla. Namhlanje, abaninzi abantu basebenzisa i-Google njengomthombo wokuqala wolwazi, nokuba bafuna izibuyekezo malunga neshishini okanye bazama ukuqonda ixesha elitsha.
Ngomlinganiselo wolwazi olufumaneka kwiwebhu, luvula amathuba amaninzi olwazi lwezcukacha. Ngelishwa, ininzi yedatha kwiwebhu ayifumaneki lula. Ikhutshwe kwifom engaqulunqiweyo ebizwa ngefomathi ye-HTML engenakukhuphela. Ngaloo ndlela, kufuna ukuba ulwazi nolwazi lobugcisa besayensi lusebenzise.
I-Web scraping yinkqubo yokuguqula idatha ekhoyo kwifomathi ye-HTML ibe ifomathi ehlelweyo engafikeleleka kwaye isetyenziswe kalula. Phantse zonke iilwimi zeelwimi zingasetyenziselwa ukukhwa kwewebhu ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, kweli nqaku, siya kusebenzisa ulwimi R.
Kukho iindlela eziliqela apho idatha ingachithwa kwiwebhu. Ezinye zezona zidumileyo zibandakanya:
1. I-Copy Copy-Namathisa
Le ndlela ephuculwayo kodwa ephumelelayo yokuchithwa kwedatha kwiwebhu. Kulolu cwangciso, umntu uhlalutya idatha yena ngokwakhe aze akopishe kwindawo yokugcinwa kwendawo.
( 19) 2. Ukubambisana Kwimizekelo yePatheni
Le ndlela enye indlela elula kodwa enamandla ukukhipha ulwazi kwiwebhu.
ezininzi zewebhu ezifana ne-Twitter, i-Facebook, i-LinkedIn, njl njl. Ikunikezela ngama-API karhulumente okanye abucala angabizwa ngokusebenzisa iikhowudi eziqhelekileyo ukufumana idatha kwifom echanekileyo.
4. I-DOM Ukumisa ( I-20)
Qaphela ukuba ezinye iinkqubo ziyakwazi ukufumana umxholo onamandla owenziwe ngamaphepha eempendulo zabaxhasi. Kwenzeka ukuba udibanise iphepha kumthi we-DOM osekelwe kwiiprogram ongazisebenzisa ukufumana ezinye iindawo zamaphepha. )
Ngaphambi kokuba uqalise ukukhangela iwebhu kwi-R, kufuneka ube nolwazi oluyisiseko kwi-R. Ukuba ungumqalayo, kukho mininzi imithombo enokukunceda. Kwakhona, kufuneka ufumane ulwazi lwe-HTML kunye ne-CSS. Nangona kunjalo, ekubeni ininzi yolwazi lwenzululwazi ayilunganga kakuhle nolwazi lobuchwepheshe lwe HTML kunye neCSS, ungasebenzisa isofthiwe evulekile njengeGadi lokuSebenza.
Ngokomzekelo, ukuba uyayifumana idatha kwiwebhusayithi ye-IMDB kwiifilimu eziyi-100 ezithandwa kakhulu ezikhutshwe ngexesha elinikeziweyo, kufuneka ulandele le nkcukacha elandelayo kwisayithi: inkcazelo, ixesha lokuqalisa, uhlobo, ukulinganisa, iivoti , ukufumana ngokubanzi, umlawuli kunye nokuphosa. Emva kokuba uchithe idatha, unokuyihlalutya ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, unokwenza isibalo semiboniso enomdla. Ngoku xa unombono oqhelekileyo wokuthi ukuchithwa kwedatha kukuphi, unokwenza indlela yakho ngeenxa zonke!